×	 Wiricheya Push Mabhawa - Pazvibato	1 × $99.99
View ngoro "Wheelcheir Push Bars - Handles" yakawedzerwa kungoro yako.
18 ″ ELR Pair yeLT-980
Yepasirese peya yekusimudza legrest
Inoenderana nemazhinji mawiricheya
Footrest pini musiyano 1 uye 3/8 inches
Turu yemahara inochinjika tsoka
Yakasimba vinyl mhuru pad
Karrest's universal inosimudzira legrest inogona kusungirirwa kune akajairwa uye asina kurema mawiricheya pamusika. Iyo yekusimudza legrest inobvumidza vashandisi kugadzirisa nyore angle pane iyo legrest yekunyatso kumanikidza kumanikidza pane yakaderera torso, yakawedzera nyaradzo, yakaderera gumbo kushomeka, pane chero anodiwa chero angle. Turu yemahara inogadziriswa tsoka dzetsoka zvakajairika izvo zvinobatsira kune vashandisi vari munzvimbo dzakasiyana dzakakwirira. Iyo yakasimba mhuru pad inogona kubhururukira kunze kana uchibuda kunze kwewiricheya.
SKU: EL18BB-INV-DY Categories: Wiricheya Zvishongedzo, Wiricheya Kukwidziridza Gumbo, Wiricheya Kudzosera Zvikamu